Bixi adeegyada OGC ee GvSIG - Geofumadas
Ku daabac adeegyada OGC ee GvSIG
Luulyo, 2008 GvSIG
Markii hore waxaan aragnay tan iyo markii laga soo qaaday Manifold waxaa suurtagal ah in ay daabacdo adeegyadda webka, laga bilaabo mashiinka desktop; sidoo kale markaan sameeyno tan aan aragno in ay jirto fursad ah in lagu yeesho bogga internetka ee heerarka WFS iyo WMS.
Xuquuqda haatan waxaa lagu dhawaaqay in hadda waa kordhin diyaar u daabacaadan gvSIG 1.1.x, kaas oo u ogolaanaya user ah si ay u daabacaan xogta geospatial iyo metadata adeegyada web Nice halkaas caadiga ah, ka interface ee gvSIG oo aan si toos ah ku samaynaya dhiganta software server.
Sidan oo kale, iyada oo aan lahayn aqoon gaar ah oo ku saabsan codsiyadan, isticmaalaha gvSIG wuxuu awood u leeyahay inuu ku daabaco internetka, oo leh xog fudud, kartoonka iyo metadata oo uu abuuro.
Qaabkan koowaad wuxuu si gaar ah u fasaxayaa in la daabaco macluumaadka geospatial ee ku saabsan server-yada soo socda iyo adeegyadan soo socda:
Khariidadaha: WMS, WCS iyo WFS.
Waxaa laga heli karaa qaybta Fidinta ee shabakadda gvSIG (http://www.gvsig.gva.es/index.php?id=2010&L=0).
Dhismaha kordhin this ayaa la sameeyey iyada oo lala kaashanayo ee magaalada Munich (Germany), ka mid ah labada hay'adaha si toos ah lala GvSIG (Department of Kaabayaasha iyo Gaadiidka Generalitat e dagaalka Iver) marka laga reebo
Si loo rakibo kordhintaan waxaa lagama maarmaan ah in la helo xNUMX.x version of gvSIG si sax ah loo rakibay.
GvSIG OS GIS kala cayncayn ah mapserver
Post Previous«Previous Wareysi lala yeesho Jack Dangermond
Post Next Baro AutoCAD fiidiyoowNext »